Clinique Médico-Chirurgicale de Tanjombato - Tsara ho fantatra
Lot III A 42 Tanjombato
Aiza no alefa ny taratasy
Ny antso an-tariby
Ny fitanterana ny marary
Ny sampana fandraisana ao amin'ny Clinique Médico-Chirugicale de Tanjombato, isokajinan'ny Ekipa (fitantanana sy medikaly) dia mandray am-pitiavana sy am-pahatokiana ho anao.
Ny efitrano rehetra, amin'ny sokajy roa samihafa,dia mitokana ho an'ny marary iray ary misy izay ilaina rehetra. Ny eny ivelany, ahitàna bozaka sy zava-maitso madio sy mahafinaritra, ahafahan'ny marary sy ny mpiandry marary mipetrapetraka sy makamaka aina.
Fikarakarana ara-medikaly/Mpitsabo mpanampy
Ny fisian'ny dokotera tsy tapaka, na andro na alina, miampy ireo mpitsabo mpanampy sy mpikarakara marary, dia antokin'ny fanaraha-maso akaiky sy tsy tapaka ny marary (tsotra na nodidiana).
Ny Clinique no mampandroso ny sakafo ara-pahasalamana sahaza ny marary tsirairay. Misy koa cafetaria ho an'ireo mpamangy.
Manaraka "nomenclature" ny sara-pitsaboana ataon'ny Clinique eo Tanjombato.
Misy ny antoka vola apetraky ny olon-tsotra eo am-pidirana, izay fenoina na amerenana rehefa mivoaka.
Ireo izay iantohan'ny sampa-piantohana kosa dia mitondra izany taratasy fanamarinana izany raha vao miditra. Ny fakitiora mifanaraka amin'ny fitsaboana dia alefan'ny hopitaly mivantana any amin'ny fiantohana.
Afaka mamangy ny marary ianao manomboka ny 1 ora folak'andro hatramin'ny 6 ora hariva isan'andro, eny na dia ny sabotsy sy alahady aza.
Ny marary izay ho taterina no sady mila fanaraha-maso akaiky ny mpitsabo dia afaka mamandrika ny "ambulance".
Aza misalasa, mandefasa imailaka aty aminay (jereo MIFANDRAISA AMINAY), fa vonona hanome fahafaham-po ho anao izay.